Barcelona oo dubatay Man City iyo Juventus oo ku durdurisay Dortmund | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Barcelona oo dubatay Man City iyo Juventus oo ku durdurisay Dortmund
Barcelona oo dubatay Man City iyo Juventus oo ku durdurisay Dortmund
Kooxda Barcelona ayaa markale garoonkeeda guul kaga gaadhay dhigeeda Man City, waxayna Barca guushan ku gaadhay 1:0, waxaan goolka kaliya ee ay ku badisay udhaliyay Ivan Rakitic. Barcelona ayaa xili ciyaareedkii sideedaad oo xidhiidh ah soo gaadhay wareega sideed dhamaadka Champions leaque-ga halka ay markale dhulka ku jiiday rajadii Man City ee ahayd inay u soo baxdo wareega xidga.
Joe Hart ayaa Man City ka badbaadiyay goolal tiro badan oo lagaga badin lahaa isaga ayaana masuul ka ahaa in Barcelona ay hal gool oo kaliya guul ku gaadho..Hart ayaa badbaadiyay 10 fursadood oo halis ah, wuxuuna noqday goolhayaha xili ciyaareedkan sameeyay badbadintii ugu badnayn hal kulan.Barcelona ayaa ku soo baxday natiijo celcelis ahaan ah 3:1.
Barcelona ayaa xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah Camp Nou ku soo dhawaynaysay kooxda Manchester City, waxaana caawa lakala ogaan doonaa kooxda Barcelona iyo Man City iska xaadirin doonta wareega sideed dhamaadka Champions Leaquega.
Barcelona iyo Man City ayaa doonayay inay ka mid noqdaan Kooxaha FC Porto, Real Madrid, Bayern Munich, PSG, Monaco iyo Atletico Madrid kuwaas oo hore boos uga sii samaystay wareega sideed dhamaadka tartanka kooxaha Yurub ee Champions Leaque-ga.
Barcelona ayaa haysata fursada ka fiican Man City iyada oo kulankii lugta hore ee Etihad Stadium ka soo dhacay 2:1 ku soo guulayata isla markaana hadda kulankan lagu ciyaarayo garoonkeeda, Laakiin kubbada cagta ahaa ah mid waxkasta laga filan karo.
Enrique ayaa shaxdiisa ku bilaabay Matthieu kaas oo difaaca kaga garab ciyaarayay Pique, Alba iyo Alves halka uu Mascherano ka ku bilawday booska burburiyaha. Rakitic iyo Iniesta ayaa caawinayay Messi, Suarez iyo Neymar oo ka ciyaari doona weerarka.
Pellegrini ayaa isaguna shaxdiisa ku bilaabay Sagna, Kompany, Demichelis, Kolarov oo difaaca ah,Nasri, Fernandinho, Toure oo khadka dhexe ah halka ay Milner iyo Silva caawin doonaan Aguero.Tababarihii hore ee Barcelona Pep Guardiola ayaa ka mid ahaa dadka garoonka soo buux dhaafiyay iyada oo la arkaayay sida uu ula dhacsanaa qaab ciyaareedka Barcelona gaar ahaan Messi.Mar uu Messi wacdaro ku dhigay city ayuu Guardiola indhaha isqabtay.
Kulankan ayaa ahaa mid xiiso iyo xamaasad badan isla markaana jamaahiirta Barcelona ay garoonka u soo buux dhaafisay si layaabley, jawiga ayaana ahaa mid dareen gaar ah samayanayay.Barcelona ayaa ciyaarta ku bilaabatay qaab ciyaareed fiican, waxayna bilawgii ciyaartaba ku sigatay inay la timaado goolka furitaanka. fursada goolka loo fishay ayaa timid daqiiqadii 6 aad markaas oo uu Neymar ku sigtay inuu Barcelona gool udhaliyo laakiin dadaalkiisa ayaa ku dhamaaday inuu birta dhinaca guduaha kaga dhaco laakiin kubbada ayaana dhaafin qariiqda goolka.
Manchester Citay ayaa heshay laba fursadood,waxaana fursado fiican helay Milner iyo Kolarov waxayna sidoo kale abuureen fursado ay ku halis galin kareen Barcelona.Laakiin daqiiqadii 31 aad ayay xaalada Camp Nou isku badashay mid aan la shari karin kadi markii Ivan Rakitic kooxda Barcelona uu udhaliyay goolka furitaanka,wuxuuna ciyaarta u badalay 1:0 ay Barcelona hogaanka kula wareegtay.
Lionel Messi ayaa dhawr ciyaartoy oo City ah ka soo duubay dhinaca midig, markii uu soo gaahay cidhifka xerada ganaaxa ayuu si layaableh kubbada u dulmariyay ciyaartoyda City oo dhan, wuxuuna meel halis ah udhigay Ivan Rakitic oo aanay wax ciyaartoy ahi ku xidhnayn. Rakitic ayaa inta uu kubbada laabta ama xabadka ku dajistay si fiican kubbada uga dulqaaday Hart, sidaana wuxuu ku dhaliyay goolka ay Barcelona halistiisa inta badan abuuraysay.
Lionel Messi ayaa laba jeer loo dhigay laaga xorta ah laakiin kubbada ayaa labada jeerba waxyar birta dulmaray.Laakiin Messi ayaa City ka yaabsaday kadib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed ilqabadleh,wuxuuna dhawr jeer kubbada ka saaray lugha saddex ciyaartoy oo City ah, taas oo sababtay in ay ciyaartoyda City ku sigtaanba in marka uu Messi kubbada haysto ay ku dhiiran waayaan.
Man City ayaa ku dhibtootay weerarka halista ahaa ee Barcelona taas oo keentay in afar ciyaartoy oo Man City ah kaadhka digniinta ah lasiiyo.Barcelona ayaa dhamaadkii qaybta hore ku sigatay inay hesho goolka labaad kadib markii uu Luis Suarez birta u garaacay, laakiin markale ayay City nasiib ku lahayd in aan gool kale laga dhalinin, waxayna ahayd markii labaad oo birta loo garaacay.
Qaybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1:0 ay Barcelona hogaanka ciyaarta ku hayasay isal markaana ay ciyaartana gacanta sare lahayd.Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Barcelona halkeeda ka siiwaday qaab ciyaareedkii fiicanaa ee ay soo bandhigtay qaybta hore ee ciyaarta.Alba iyo Messi ayaana ku sigtay inay goolal udhaliyaa Barcelona laakiin Hart ayaa sameeyay badaabino fiican.
Man City ayaa heshay fursado fiican iyada oo xeraa ganaaxa Barcelona ku heshay kubbad halis ahayd oo ay dhawr jeer ku celceliyeen inay goolka barbaraha ku layimaadaan, laakiin kubbada ay Barcelona iska saartay yuu Neymar meel halis ahayd uga saaray Messi, laakiin inkasta oo uu Messi difaaca dhaafay isla markaana uu Hart kula soo baxay ayuu markale goolhaye Hart sameeyay badbaadin lahaableh.
Daqiiqadii 78 aad ayaa Man City lagu abaal mariyay rekoodhe kadib markii Pique iyo Mascherano ay isku celiyeen Aguero, waxana rekoodhaha qaatay Sergio Aguero laakiin goolhaye Marc-Andre ter Stegen ayaa rekoodhaha ka beeniyay Aguero kooxdiisana wuxuu ku sii hayay inay hogaanka hayso.
Laakiin dhinaca kale Hart ayaa ahaa hayayga city kaas oo markale Neymar ka badbaadiyay kubbad uu kula soo baxay.Harta ayaa Barcelona u diiday inay dhaliyaan fursado badan oo goolal loo fishay, wuxuuna ahaa ciyaartoyga Citizens ugu fiicnaa.Hart ayaa Suarez, Messi, Alba iyo Neymar ka badbaadiyay waxaan fursado aan qoraal lagu sharixi karin.
Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1:0 ay Barcelona guul kaga gaadhay Man City , waana guushii afraad oo ay Barca ka gaadho Citizens afar kulan oo ay ciyaareen Champions Leaque-ga laba xili ciyaareed oo isku xiga. Barcelona ayaana u soo baxday wareega sideed dhamaadka Champions Leaque-ga.
Man City ayaa ahayd kooxda ugu danbaysay kooxaha horyaalka Ingiriiska, waxaana hadda soo baxay kooxaha FC Porto, Real Madrid, Bayern Munich, PSG, Monaco, Atletico Madrid, Barcelona iyo Juventus.
Juventus ayaa caawa 3-0 kaga adkaatay Borussia Dortmund.